Friday November 09, 2018 - 17:15:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Weerarkan ayaa lagu daahfuray camaliyad Istish-haadi ah kadibna ciidamo hubeysan oo inqimaasi ah ayaa gudaha u galay Hotelka, waxaana hadda ay xabad kulul ka socotaa gudaha Hotelka sida ay ilo wareedyo u xaqiijiyeen shabakada SomaliMeMo.
Markii ay dagaalyahannadu gudaha u galeen Hotelka ayey dadkii ku jiray Hotelka waxay u soo yaaceen dhanka ilinka dambe ee Hotelka si ay u baxsadaan, balse waxaa iyagana lala eegtay camaliyad kale oo istish-haadi ah oo dhacday 5 daqiiqo ka dib markii uu howlgalku bilowday.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkan waxayna xaqiijisay in ay beegsatay Hotelka Saxafi oo ay daganyihiin xildhibaanno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, saraakiil amni iyo mas'uuliyiin ka tirsan DFS.
Xabadda ayaa weli ka socota gudaha Hotelka, waxaana dagaalyannada lagusoo warramayaa in ay toogasho ka wadaan qololka Hotelka, welina ciidamada DFS uma suuragalin ay gudaha u galaan dhismaha oo ay soo afjaraan weerarka.
la soco wixii ku soo kordha INSHA'ALLAAH